त्यसो भए अब हिजो गाँउको मास्टको टाउको फुटाउने टेष्ट पास, बम पडकाउने बि. ए., अनी मान्छे मार्ने एम.ए. हुने भए। अझ त्यहि अनुपातमा जाँदा माडीमा बस पडकाउने र ठाँउ ठाँउमा सैयौमको संख्यामा ज्यानलिनेहरुले त पि. एच. डि. र डिलिट नै पाउने होलान ।
ल भोलिको नया नेपालमा कर्मचारी र प्रशासकहरु पनि यिनै जनशिक्षा हासिल गरी जन सर्टीफीकेट पाउने त बन्ने होलान अब। जनताका छोराहरुले खाई नखाई टुपी बाँधेर नपढेनि भो ।
डीग्री दिंदा के बिषयमा दिने रहेछन्? विज्ञान, वाणिज्य,अर्थशास्त्र आदिमा त पक्कै दिन मिलेन क्या रे। यस्तो उटपट्यांग कुरो संसारमा कहिं सुनिएको थिएन। मात्रिकाको दिमाग खुस्केको भनेको, यी बाबुराम डाक्टर साहेबको पनि उस्तै हो कि, क्या हो? शैक्षिक डिग्री होइन, रोजगारमूलक तालिमहरू दिनु पर्छ।
पोस्तक जी ले हसाउनू भयो, डीग्री दिंदा के बिषयमा दिने रहेछन्? भने पछि ठरकि दादाले भने जस्तै हुना होला नि ल भोलिको नया नेपालमा कर्मचारी र प्रशासकहरु पनि यिनै जनशिक्षा हासिल गरी जन सर्टीफीकेट पाउने त बन्ने होलान अब।
अब म पनि तेतै तिर लग्नु पर्ला जस्तो छ अहिले त भर्ना पनि खोलेको रहेछ त । पढेर बेरोजगर हुने भएपछि त के गर्नु अब । किन गर्नु त पढ्नलाइ यत्तिको खर्च